Kuzvidya mwoyo uye kutya - Misiyano mikuru | Bezzia
Kunyangwe mune dzimwe nguva vanoenda vakabatana, nhevedzano ye kusiyana pakati pekuzvidya mwoyo uye kutya. Nekuti ese ari maviri haana kufanana uye inguva yekutanga kunzwisisa paanofanira kuparadzaniswa. Asi zvinogona kutungamirira kukuvhiringidzika kukuru kana toreva nezvemanzwiro. Unoziva kuasiyanisa here?
Kana tikafunga nezvazvo, zvakaoma, hongu. Nokuti mune zvose zviri zviviri kunzwa ikoko kwekutambudzika kunogona kuva muzvose zviri zviviri kutya uye kufunganya. Asi isu hatisi kuzovatora semaitirwo akafanana, nekuti pane zvakawanda zvinovaparadzanisa. Saka, tsvaga pazasi nezvese zvatinazvo kwauri.
1 Zvinokurudzira zvinomutsa kufunganya uye kutya zvakasiyana
2 Maitiro acho
3 Chiratidzo mune chimwe nechimwe chazvo
4 Nguva yekuonekwa kwayo
5 mabatirwo avanoitwa
Zvinokurudzira zvinomutsa kufunganya uye kutya zvakasiyana
Kureva kuti kana tanzwa kushushikana tinozviita nekuda kwemamiriro ezvinhu asina chekuita nekutya. Saka zvinoitika munzvimbo dzakasiyana. Kuti zvive zvakajeka kubva pakutanga, zvinofanira kutaurwa izvozvo kutya kunooneka muzuva redu apo kunenge kune ngozi iyo upenyu hwedu hwaizova mungozi yakakomba nokuda kwayo. Ukaona ingwe ichimhanya ichiuya kwauri, unonzwa kutya kana kuvhunduka asi kwete kunetseka. Sezvo isu tichinzwa sekutyisidzira, sechinhu chinogona kuitika asi hachisati chaitika, asi akati kutyisidzira hakuiti chero mhando yengozi kuhupenyu. Kunyange zvazvo dzimwe nguva zvingaita sezvakadaro, nokuti ichokwadi kuti kuva nefunganyo kunotiunzira nhevedzano yezviratidzo zvinoratidzika kuva zvine ngozi kwatiri asi izvo zviri kutidzivirira chaizvoizvo.
Zvino isu tinoziva kuti mavambo ezvose haana kufanana, saka maitiro ekunzwa nawo haanawo.. Nekuti kana isu tichitya, yekutanga reflex chiito chemuviri ndechekutiza, kuridza mhere, dzimwe nguva kuramba uchinetseka, nezvimwe. Asi nefunganyo, hazvina maturo kutiza kana pfungwa dzedu dzichidavira kuti pane chinetso chakakomba. Naizvozvo, tinofanira kutsvaga dambudziko iro rinoburitsa pfungwa dzakaipa uye rinova injini yehupenyu hwedu. Saka, maitiro akasiyana zvachose.
Chiratidzo mune chimwe nechimwe chazvo
Kune vanhu vakawanda vasingagoni kunzvenga chitarisiko chavo chechiso kana chimwe chinhu chichivanetsa kana kuti pavanenge vachichifarira. Kureva kuti nema gestures vachaona kuti vakasununguka here kana kuti kwete. Saka, kana mumwe munhu achitya, isu tiri pachena kuti zvichaonekwa pachiso chavo. Nekuti kutaura kwacho kwakakosha uye sekudaro, kunozivikanwa. Zvinonzi ndezvenyika yose nokuti munyika yose munhu wose acharatidza kutaura ikoko pasina anosiya. Asi panguva iyo pane kunetseka, hapana kutaura kune hukama nazvo.
Nguva yekuonekwa kwayo
Kana isu tichitya imhaka yekuti ndezvekuti kukurumidza kuita kwekutyisidzira kwatinako pamberi pedu. Asi kufunganya hakungoerekana kwauya nekuti tatarisana netyisidziro. Uyezve, zvinonzi kufunganya kunowanzouya mushure menguva yekuunganidza matambudziko kana manzwiro. Kunyange zvazvo zvichaonekwawo patinonyanya kunetseka nezveramangwana uye nezvezvinhu zvisati zvaitika. Saka, sezvatinoona, nguva iyo imwe manzwiro inogona kuonekwa uye imwe yatove yakasiyana.
Kurapa kwekuzvidya mwoyo uye kutya kwakasiyanawo. Nokuti munyaya yekutya, inogona chete kuunzwa kurapwa kana tichitaura nezve phobias inodzivirira hupenyu hwedu hwemazuva ose. Nepo patinotaura nezvekushushikana, sekutonga kwakawanda iwe uchafanirwa kuve nekurapa kwepfungwa uye yepfungwa, uko Mutsara wehunyanzvi uchapihwa kuti uise mukuita uye edza kudzora manzwiro uye iwo pfungwa izvo zvinoita kuti hupenyu hwako huve husingaite.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Psychology » Kusiyana pakati pekuzvidya mwoyo uye kutya